Nerds, muusigga ku saabsan Steve Jobs iyo Bill Gates, waa la joojiyay | Waxaan ka socdaa mac
Hal usbuuc ka dib daqiiqad weyn oo loogu talagalay shirkadda tufaaxa ee lagu qaniinay soo bandhigida alaabteeda cusub, xubnaha muusikada Nerds ma la kulmaan isku mid. Muusikada ku saabsan nolosha Steve Jobs iyo Bill Gates waa in la joojiyaa ka dib markii ay lumiyeen taageeradii kafaala-qaadeheeda weyn.
Bandhigga aan ka hadlayno waa muusikada, oo loo yaqaan 'Nerds,' kaas oo loogu tala galay in laga furo Broadway 31-kii bishan.
Muusikada Nerds-ka ma ahan markii ugu horreysay ee ay iftiinka aragto waana tii horay loo soo dhigay 2005 Bandhig Faneedka Masraxa New York by Shirkadda Tiyaatarka ee Philadelphia. Xaaladdan oo kale, noocyadan cusub ee bandhigga ah waxaa fuliyay soo saaraha Carl Levin, taasoo aan hore u arag waddo kale oo looga baxo oo aan ahayn inay u baajiso sababo la xiriira dhibaatooyinka gudaha iyo kuwa kafaala-qaadka ah.
Muusiggaan waxaan ka heli karnay xiddigo sida Elizabeth Williams, Bryan Fenkart oo u ciyaaraya Bill Gates, Rory O'Malley oo ah Steve Jobs ama Jordan Allen-Dutton iyo Erik Weiner, iyo kuwo kale.
Runtu waxay tahay inay tahay war aad uxun hadii aad qorsheyneysay inaad kaqeyb gasho muusikadan si aad ula jaanqaado joogitaanka wadanka. Waan feejignaan doonaa si loo eego haddii ay maareeyaan inay saxaan dhibaatooyinka ay la kulmeen oo ay hadhow sii daayaan.
Haatan waxa dhammaanteen inaan sameyno waa inaan sugno 21-ka Maarso ee soo socota oo aan aragno sida Tim Cook iyo inta la socota ay ugu cayaarayaan masraxa Keynote iyagoo u soo bandhigaya wararka soo socda labada qalab iyo softiweer.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Nerds, muusigga ku saabsan Steve Jobs iyo Bill Gates, waa la joojiyay
Naqshadaynta Khibradda Adobe ayaa loo heli karaa Mac
Snapheal, oo lagu iibinayo waqti xaddidan Mac App Store